I-Nifuratel powder emfutshane (4936-47-4) hplc =98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Nifuratel powder (4936-47-4)
SKU: 4936-47-4. Udidi: IiReagents zeR & D
AASraw unani kuyondelelaniswe kunye nemveliso nako ukusuka gram ukuya ubunzima Nifuratel lomgubo (4936-47-4), phantsi komqathango CGMP kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho zibonwe.
Ividiyo ye-Nifuratel powder
I-Nifuratel powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Nifuratel powder
I-molecular Formula: C10H11N3O5S
Isisindo somzimba: 285.28
umbala: I-White ukuya kumhlophe i powstalline powder
I-Nifuratel emfutshane ipowder ekusebenziseni
Ukusetyenziswa kwe-Nifuratel powder
I-Nifuratel powder yiyilisi esisetyenziselwa ubuchopho. Ingummeli we-antiprotozoal wendawo kunye ne-antifungal enokuthi inikwe kwakhona ngomlomo. I-Nifuratel powder ayivunyelwanga ukusetyenziswa e-United States. Kuthathwe ngomlomo, okanye njenge-pessary ye-vaginal, isetyenziselwa unyango lwezinto ezininzi zokusulela kwi-genito-urinary tract, ingakumbi ukuba akukho zifo ezikhoyo ezikhoyo. Umzekelo, ungasetyenziselwa unyango lwabasetyhini abonakalisa ukukhulelwa kwamanzi apho kungekho ngqiqweni malunga nokuba i-Trichomonas vaginalis okanye i-Candida ingxaki ezifana ne-Candida albicans.
I-Nifuratel powder (Magmilor) yayifaniswa ne-metronidazole (Flagyl) ekwenzeni unyango lwe-trichomonal vaginitis ngolu vavanyo olungaphendulwanga kabini. I-18 kuphela yezigulane ze-47 (38%) eziphathwe nge-Nifuratel powder eluhlaza zifunyenwe zonyango, kanti i-42 yezigulane ze-49 (85%) eziphathwe nge-metronidazole zaphiliswa. Ukuphendula okuphawulekayo, kufuneke ukuhoxiswa kwonyango, kwenzeka kwizigulane ezintathu eziphathwe nge-Nifuratel powder eluhlaza. Kwakungekho miphumo echaphazelekayo kunye ne-metronidazole. Iziphumo zolu vavanyo zibonisa ukuba i-Nifuratel powder ayikho enye indawo eyanelisayo ye-metronidazole kunyango lwe-trichomoniasis.
Isilumkiso kwi-Nifuratel powder
I-dose ephakamileyo I-Nifuratel powder ye-aerobic vaginitis elula kunye ne-aerobic vaginitis: I-single-center yokufunda
Ukusebenza kunye nokukhuseleko kwamabhanki amabili e-Nifuratel powder ukuze unyango lwe-aerobic vaginitis (AV) lufaniswe.
Lo kwakuyi-prospective-label labhoring study of patients in diagnosis and treatment at Tianjin Third Central Hospital phakathi kweJanuwari 2012 noDisemba 2013. Ubukho be-bacterial vaginosis (BV), i-vulvovaginal candidiasis (VVC), okanye / kunye ne-trichomonal vaginitis (iTV; i-AV mix) izimisele. Izigulane zazingenakulinganiswa kwi-Nifuratel powder eluhlaza-500 (500 mg Nifuratel powder, intravaginal, iintsuku ze-10) okanye i-Nifuratel powder eluhlaza-250 (i-250 mg i-Nifuratel powder, i-intravaginal, imihla ye-10), kwaye ilandelwe iintsuku ezintathu ukuya kwezixhenxe emva kokupheliswa konyango. . Iziphumo eziziiprayimari neziziisekondari ziyizinga lokubuyisela kunye neziganeko ezimbi, ngokulandelanayo.
Olu pho nonongo lubandakanya izigulane ze-142 ezine-AV. Ubudala abuzange buhluke kakhulu phakathi kwamaqela (n = 71 nganye), kwaye ukusabalaliswa kwezifo kwakufana: 29 (40.85%) AV elula kunye ne-42 (59.15%) AV evuthene (AV + BV, 42.86%; AV + VVC, 30.95% ; AV + TV, 26.19%). Kwizigulane ezine-AV elula, izinga lokubuyisela alizange lihluke kakhulu phakathi kwe-Nifuratel powder eluhlaza-500 (26 / 29, 89.66%) kunye ne-Nifuratel powder-250 (22 / 29, 75.86%) amaqela. Kwizigulane ezine-AV ezixutywayo, amaxabiso okubuyisela aphezulu kakhulu kwi-Nifuratel powder-500 kunokwi-Nifuratel powder-250 iqela (AV + BV, 88.89% vs 50.00%; AV + VVC, 76.92% vs 30.77%; AV + TV, 90.91% vs 36.36%; yonke i-P <0.05). Isigulane esisodwa (i-Nifuratel powder eluhlaza-i-500) yabika isiganeko esibi (ukusabela okunyanga kwe-anaphylactic).
I-Nifuratel powder I-500 mg ibonise ukusebenza kakuhle kweklinikhi kunyango lwe-AV, ngokukodwa i-AV edibeneyo, kwaye iphezulu kwi-250 mg umthamo kwonyango lwe-AV exutshwe.
I-Nifuratel powder (i-CAS 4936-47-4) ibonisa umsebenzi onamandla wokulwa ne-antiprotozoarian kunye ne-antibacterial kwaye inikwe imiphumo ethile ye-fungicidal, kodwa ayisebenzelanga nefuthe le-physiologic. Ukuphumelela kwindlela yokuphulukisa imvavanyo kuye kwavavanywa ngaphezu kwezilwanyana ze-12,000. Amava e-kliniki ebanzi kunye ne-Nifuratel powder iqinisekisa ukuba isichenge siphephile kwaye sisebenza kakuhle kunyango lwe-trichomoniasis, i-bacterial vaginosis, i-candidacy, kwaye ingakumbi kwizigulana ezixhatshazwayo. Uhlalutyo lweemeta lwezilingo zeeklinikhi kuthelekisa i-Nifuratel powder eluhlaza kunye ne-metronidazole (i-CAS 443-48-1) kwiintsholongwane ezingenasifo. Zonke izilingo ezilawulwa yi-metronidazole ezilawulwa zizigulane ezinezifo ezikhuselekileyo zifakiwe, ukuthobela ezi zilandelayo: i-1) unyango luvavanywa kokubili ukunyamalala kweempawu kunye nempawu, kunye nokufumanisa okungahambiyo kwezinto eziphilayo; I-2) iimvavanyo ze-microbiological ezenziwe ngeendlela ezichanekileyo zisetyenziselwa ukusetyenziswa kwangoku. Kukhethwe izilingo eziyisixhenxe zeekliniki, kubandakanywa izigulane ze-1767 jikelele, i-832 ephuma kuyo i-Nifuratel powder kunye ne-935 kunye ne-metronidazole. Iziphumo zohlalutyo lwe-meta ziqinisekisile ukulingana phakathi kwe-Nifuratel powder kunye ne-metronidazole: i-total proportion yezigulane eziphilileyo kula maqela amabini yayingu-88.5% kunye ne-90.0%, ngokulandelanayo, phambi kobudlelwane phakathi kwezifundo (p = 0.342). Kwimeko echanekileyo neyingozi, uhlalutyo lwe-Odds ratio luquka i-1 kunye nexabiso le-p yokuvavanya ingcamango yokungabikho mmahluko phakathi kwezonyango zi-0.656-1.266, p = 0.582 (iziphumo ezinqamlekileyo) kunye ne-0.643-1.290, p = 0.599 ( iziphumo ezingahleliyo), ngokulandelanayo, ezibonisa ukulingana. Ngaphezulu, ezinye iiphando ezilawulwayo kunye namava ephilileyo ekliniki kubonisa ukuba izinga lokuphilisa lika-Nifuratel powder olukhuni kwizigulane ezinezifo ezixubekileyo ngenxa ye-Trichomonas vaginalis + Candida okanye i-Trichomonas vaginalis + ibhaktheriya okanye ne-bacteria vaginosis kunye ne-bacteria vaginosis kunye ne-metronidazole, ngenxa yobuninzi bezenzo zeNifuratel powder.
Ubunzima beNifuratel Raw
I-Nifuratel powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Nifuratel powder kwi-AASraw
Indlela yokuthenga i-Nifuratel Drug (4936-47-4) inyathelo ngeNyathelo kwi-Intanethi